Faahfaahin weeraro qaraxyo ismiidaamin ah oo lala beegsadey ciidamada AMISOM – SBC
Faahfaahin weeraro qaraxyo ismiidaamin ah oo lala beegsadey ciidamada AMISOM
Weeraro isqarxin ah oo ay geysteen dad naftood biimeeyey oo ayaa la soo sheegayaa in lala eegtey xarumaha ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Diblumaasi fadhigiisu yahay magaalada Nairobi oo codsadey inaan magaciisa la xusin sababo uu ku sheegay in loo ogaleyn in uu saxaafada la hadlo ayaa u sheegay wakaalada wararka AP in weeraro kala duwan lala eegtey fariisimada AMISOM balse aanu xaqiijin karin tirada khasaaraha weerarkaasi uu dhaliyey.
Warar SBC ay ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in weerar ismiidaamin ah lala beegsadey saldhiga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin guriga shaqaalaha.
Weerarkaasi ayaa ilo wareedkan waxay xaqiijinayaan inay ku dhinteen laba askari oo ka tirsan ciidamada AMSOM, iyo sadex nin oo ahaa ragii weerarkaasi ismiidaaminta ah fuliyey.
War laga soo xigtey sarkaal ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hakiyeen gaari ay wateen rag ku labisan dharka ciidamada DFKMG ah, isla markii ay ciidamadu joojiyeen oo ay rasaas ku fureen ay isqarxiyeen, wuxuuna sheegay in ay dileen ragaasi.
Capt. Prosper Hakizimana oo ka mid ah saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa isaguna geestiisa xaqiijiyey in ciidamadu toogteen nin ku labisnaa tuutaha ciidamada DFKMG ah isla markii ay rasaas ku fureen uu is qarxiyey, waxaana uu ka gaabsadey in uu sheego khasaaraha uu geystey weerarkaasi isqarxinta ah.
Dhimashada askarta AMISOM ayaa la sheegay in ay timid ka dib markii ay ciidamadu isku dayeen inay baaritaan ku sameeyeen nin ka mid ah ragga isqarxinayey, kaasi oo meydkiisu uu qarxay, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmey shan askari oo kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM.
Weeraradan isqarxinta ah ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadayaa iyadoo saaka qarax miino loo adeegsadey oo la dhigay wadada dhinaceeda lala beegsadey ciidamo ka tirsan dawlada KMG ah ee Soomaaliya, weerarkaasi ayaa waxaa uu geystey khasaare 6 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo isagu jira ciidamada Dawlada & ardey iskool waxbarasho u socotey.